यी हुन् गणेश थापालाई थप्पड हान्ने मधुसुदन, किन हाने ? - Enepalese.com
यी हुन् गणेश थापालाई थप्पड हान्ने मधुसुदन, किन हाने ?
इनेप्लिज २०७३ वैशाख १ गते १५:५२ मा प्रकाशित
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्व अध्यक्ष एवं राप्रपा नेपालका सांसद् गणेश थापालाई एक युवकले थप्पड हानेका छन् । सोमबार पशुपति आर्यघाटमा मलामी गएका थापालाई ललितपुरका ३३ वर्षीय मधुसुदन महतले झापड हानेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हेर्नुस भिडियो: –